Moto G6, G6 Plus iyo G6 Ciyaar: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga | Androidsis
Toddobaadyo ka dib macluumaad badan oo ka dillaacay saddexda taleefan, Motorola waxay aakhirkii soo bandhigeysaa heerkeeda dhexe ee cusub. Waa xayndaab lagu cusbooneysiiyay saddex nooc oo gaara Moto G kala duwan. Waxay ku saabsan tahay Moto G6, G6 Plus iyo G6 Play. Saddex taleefan oo ah hawo hawo nadiif ah bartamaha-shirkadda. Labadaba xaga qaabeynta iyo qeexida.
Tan iyo markii aan kari karno, sida moodooyinka, waxaan ku sharxi karnaa naqshad aad u socota oo leh 18: 9 shaashado. Maxaa intaa ka badan, waxaad ku arki kartaa horumar la taaban karo marka la eego qeexitaannada ku jira Moto G6, G6 Plus iyo G6 Play. Marka wax waliba waxay muujinayaan inay guul u noqon doonaan Motorola.
Sidoo kale, waxaan horeyba uheysanay qeexitaanada dhameystiran ee seddexda nooc ee la heli karo, si aan midkoodna mar dambe sir inoo sii hayn. Marka xigta waxaan si shaqsi ah ugala hadli doonnaa waxyaabaha ku saabsan Moto G6, G6 Plus iyo G6 Play oo Motorola ay ku cusbooneysiineyso bartamaheeda.
2 Tilmaamaha Moto G6 Plus
3 Tilmaamaha Moto G6 Ciyaar
4 Qiimaha iyo helitaanka
Waxaan ku bilaabaynaa taleefanka baabtiis ka dhigaya shirkadan cusub. Taleefan si fiican u qeexaya heerka dhexe ee hadda jira marka la eego qeexitaannada. Marka waa taleefan milix leh, oo ballan qaadaya waxqabad wanaagsan isla markaana leh wax ka badan ama ka yar wax kasta oo isticmaaleyaashu maanta u baahan yihiin. Marka shaki la'aan, tani waa warqad dabool wanaagsan. Kuwani waa qeexida Moto G6:
Screen: 5,7 ″ IPS LCD oo leh FullHD + qaraar iyo saamiga 18: 9
Gacaliye: Snapdragon 450
Kaydinta Gudaha: 32/64 GB (oo lagu ballaarin karo microSD)
Cámara trasera: 12 + 5 MP oo leh aperture f / 1.8, PDAF, qaabka sawirka iyo duubista video 1080p
Kaameerada hore: 8 MP oo leh duubista 1080p video
Batariga: 3.000 Mah oo leh lacag degdeg ah
kuwa kale: Akhristaha faraha hore, nooca USB C, Bluetooth 4.2, Dolby Audio afhayeenka hore, iska caabbinta biyaha
Cabbirada: 153,8 x 72,3 x 8.3 mm
Peso: 167 garaam
Tilmaamaha Moto G6 Plus
Qaab-dhismeedkan labaad waa nooc ka yara dhammaystiran qaabkii hore. Sidoo kale, way ka sii ballaadhan tahay. Laakiin waxay leedahay qodobo badan oo ka siman telefoonka aan hadda soo bandhignay. Waa qeybta dhexe ee ugu dhameystiran ee shirkaddu soo bandhigtay maanta. Qalab tayo leh, oo leh waxqabad wanaagsan oo leh shaqooyin sida aqoonsi wajiga ah. Kuwani waa tilmaamahaaga:
Screen: 5,9 inji IPS LCD leh FullHD + xal iyo 18: 9 saamiga
Gacaliye: Snapdragon 630
Kaydinta Gudaha: 64/128 GB (oo lagu ballaarin karo microSD)
Cámara trasera: 12 + 5 MP oo leh f / 1.7, PDAF, qaabka sawirka iyo duubista fiidiyowga ee 4K
kuwa kale: Akhristaha faraha hore, nooca USB C, Bluetooth 5.0, NFC, caabbinta biyaha
Cabbirada: 160 x 75.5 x 8.0 mm
Kaalinta saddexaad waxaan ka helnaa telefoonka ugu fudud saddexda in shirkaddu ku soo bandhigtay xaddidan. Waa telefoon xoogaa ka fudud, oo la mid ah kii hore. Inkasta oo ay leedahay faahfaahin faahfaahsan oo xiisa leh, taasina waa tan kaliya ee saddexda ah ee leh akhristaha sawirka dambe. Xaaladaha kale waa hore. Kuwani waa qeexitaan buuxa Qalabka:
Screen: 5,7 inji IPS LCD leh FullHD + xal iyo 18: 9 saamiga
Gacaliye: Snapdragon 430
Kaydinta Gudaha: 32 GB (oo lagu ballaarin karo microSD)
Cámara trasera: 13 MP oo leh f / 2.0 aperture, PDAF, qaabka sawirka iyo duubista fiidiyaha 1080p
Batariga: 4.000 Mah oo leh lacag degdeg ah
kuwa kale: Bluetooth 4.2, akhristaha faraha gadaal, microUSB, Dolby Audio afhayeenka hore
Cabbirada: 154,4 x 72,2 x 9 mm
Marka la ogaado tilmaamaha saddexda taleefan, waxaa jira laba su'aalood oo laga jawaabayo, qiimaha iyo taariikhda ay taleefannadu ku dhici doonaan suuqa. Nasiib wanaag, waxaan horeyba uga helnay macluumaad ku saabsan dhammaan baaxadda Moto G6.
Saddexda nooc ayaa lagu soo bandhigi doonaa suuqa bilowga Maajo.. Marka qiyaastii laba ama saddex toddobaad waxay bilaabi doonaan inay yimaadaan dukaamada. Waanu kula soo socodsiin doonaa markay tani dhacdo. Intaa waxaa dheer, waxaan horay u ogaanay qiimahooda:
Moto G6 Plus waxaa laga heli karaa 299 euro
El Moto G6 wuxuu yeelan doonaa qiimo laga bilaabo 249 euro
Motorola Moto G6 Play waxaa lagu heli doonaa qiimo dhan 199 euro
Sideed u aragtaa taleefannada cusub ee Motorola?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola » Motorola Moto G6, G6 Plus iyo G6 Play: Qadka dhexe waa la cusboonaysiiyay